Iphrofayili yenkampani - YTO POWER
I-YTO POWER ngumkhiqizi ophambili wenjini yedizili eChina futhi ongaphansi kweChina YTO Group
Ku-YTO POWER, sinesikhungo sethu Sobuchwepheshe (Isikhungo Sikazwelonke Sezobuchwepheshe) sokucwaninga ngezinjini zedizili, futhi sinobudlelwano obusondelene nezikhungo ezaziwa kakhulu zomhlaba wonke ezifana ne-AVL e-Austria, eJalimane FEV eJalimane, YAMAHA eJapan naseSouthwest Research Institute e- izizwe Ezihlangene. Ukucwaninga namandla ethu okuthuthuka, kuhambisana nomsebenzi onzima wabasebenzi bethu abanolwazi olukhulu, kusenza sikwazi ukuqhubeka nokuthuthukisa izinjini zethu zikadizili.
Ku-YTO POWER, sakha imikhiqizo yethu ngokuya ngamazinga aphesheya. Siyi-ISO9000, ISO14000 ne-TS-16949 eziqinisekisiwe, nezinjini zethu zikadizili, eziqinisekiswe yi-US EPA, iEuropean Emark kanye nesitifiketi se-CE. Namuhla, imikhiqizo yethu ifunwa kakhulu ngamakhasimende ngamakhasimende womhlaba wonke.
Njengamanje sinezisekelo ezimbili zokukhiqiza injini yedizili, esisodwa eTaizhou City, eSifundazweni saseJiangsu, sikhiqiza uchungechunge lwezinjini ezingama-YD (YANGDONG) ezinezinjini ezintathu zesilinda kanye nezine-silinda ezine ezinamandla kusuka ku-10kw kuya ku-100kw, kanti enye eLuangang City, esifundazweni saseHenan, kukhiqizwa izinjini ze-LR ne-YM eziwuchungechunge ezine ezine-silinda nezinjini eziyisithupha zamadayimane. Amandla e-ramg ukusuka ku-100KW kuya ku-500kw. Ngenethiwekhi yethu yezentengiso yamazwe omhlaba, imikhiqizo ye-YTO POWER manje isiyathengiswa emazweni angaphezu kwezi-100 nezifunda emhlabeni wonke.
Thina kwa-YTO AMANDLA silangazelele ukusebenza namakhasimende emhlabeni wonke ukwakha ikusasa elingcono! Sicela uxhumane nethimba lethu lokuthengisa ngolwazi oluthe xaxa.